Ithetha ukuthini ukuzikhetha uhlale wedwa?
Ukuzikhetha uhlale wedwa kuthetha ukuthi uyazikhetha kwabanye abantu njengendlela ephambili ukuze bangosuleleki ixesha eliziintsuku ezili-14. Yindlela esebenzayo ekhusela abo bahlala nawe – usapho lwakho, abahlobo bakho kunye nabo usebenza nabo – kwi Covid-19.
Njengenxalenye yokumiswa ngxi kwezinto kufuneka sonke sihlale emakhaya siphume kuphe ukuba kufuneka kufuneka wenze izinto ezingundoqo.
Noxa kunjalo, ukuba uzikhethile uhlala wedwa iintsuku ezili- 14 kufuneka ungadibani nabanye abantu kangangoko, hlala ekhaya yaye ungaphumi uye kuthenga ukutya okanye ulande amayeza- wa ode ngomnxeba okanye ku-online, okanye ucele omnye umntu akuzisele ekhaya. Ungasisebenzisi isithuthi sika wonke wonke, iiteksi okanye nasiphi na isithuthi esifana nayo ngeli xesha leentsuku ezili -14.
Ungasisebenzisa isithuthi sabucala kodwa yiya kuphela kwiindawo ezingundoqo. Ungasebenzisa igadi ukuba unayo. Ungaphuma endlwini uye kuzilolonga- kodwa zama ukuba nesithuba esiyi 1.5 yeemitha phakathi kwakho nomnye umntu (imitsi emithathu) kwabanye abantu.
Ngubani ekufuneka ahlale yedwa?
Wonke umntu ucelwe ukuba ahlale ekhaya, noxa kunjalo, kufuneka uhlale ekhaya iintsuku ezili-14 uzikhethe ebantwini ukuba uneempawu ze-Covid-19 okanye uhlala nomntu onayo.
Sifuna nabani na ovela kumazwe aphesheya (ongumngcipheko okanye engenguwo) owehla kwiinqwelomoya ezingena eNtshona Koloni kufuneka azikhethe ahlale yedwa iintsuku ezili -14.
Ukuba awuqinisekanga kufuneka uhlale ekhaya, nokuba uneempawu zeCivid-19 (unobushushu obungamandla okanye obutsha, unokhohlokhohlo olungapheliyo), nceda tsalela iprovincial hotline kule nombolo 021 928 4102 ukuze ufumane iingcebiso ukuba ungenza ntoni. Nceda funa uluvo lwesibini komnye umntu ukuba unenkxalabo.
Ndingenza njani ukuba ndizikhethile ndihlala ndodwa yaye ndikwahlala nomntu obuthathaka?
Ukuba uzikhethile yaye uhlala nomntu okwiminyaka engama -70 nangaphezulu, onesigulo esondeleyo esinexesha elide, ukhulelwe okanye amajoni akhe omzimba akomelelanga, zama ukulungiselela ukuba ahlale nomnye umntu wosapho okanye umhlobo kangangeentsuku ezili-14. Ukuba kunyanzelekile ukuba nihlale kunye, zama ukuba nihlale kude omnye komnye.
Zama ukugcina umgama ongange-1.5 yeemitha omnye komnye
Ningasebenzisi iindawo enye yokuhlala, ezifana nekhitshi, okanye indlu yangasese, niye ngamaxesha ohlukeneyo
Vula iifestile kwindlu enihlala kuyo
Coca indlu yangasese lonke ixesha emva kokuyisebenzisa, umzekelo ngokosula umphezulu obe ubambelele kuwo
Hlamba impahla zakho nezitya zakho zodwa zingadibani nezinye.
Ungalali namntu, ukuba unakho
Ungasebenzisi iitawuli nomnye umntu, kuquka iitawuli zokusula izandla, iifadukhwe zeti, ezokuhlamba ubuso okanye amashiti ebhedi
Ungasebenzisi zitya nomnye umntu, iglasi zokusela, ikomityi, okanye amacephe neefolokhwe ekhaya
Ungaseli ziselo nokutya nabanye abantu
Umntu wosapho lwakho angakwenzela ukutya kodwa wena awunako ukwenzela abanye abantu ukutya.
Ndingayicoca njani indlu yam, ndichithe amanzi okanye ndihlambe iimpahla xa ndizikhethile ndihlala ndodwa?
Sebenzisa izinto obe uzisebenzisa kakade ekhaya, ezifana nezibulali-ntsholongwane nebleach, xa ucoca ikhaya lakho.
Inkunkuma yakho mayifakwe kwiiplastikhi ezimbini zomgqomo yaye zibekwe elangeni kangangexesha eliziintsuku ezintathu ukuya kwezintlanu phambi kokuba ifakwe emgqomeni oya kuthi ulandwe nguMasipala.
Yilahle njengesiqhelo enye inkunkuma. Hlamba iimpahla zakho kumatshini wokuhlamba njengesiqhelo.
Impahla ethe yadibana neyomntu ogulayo ingahlanjwa yonke neyabanye abantu. Ungayishukumisi impahla emdaka, kuba oku kungasasaza intsholongwane emoyeni.
Kungangcono ukuba omnye umntu angakusongela aze aye kuyipakisha impahla ecocekileyo efana neetawuli kunye namalatshana eti – tea towels) yaye kunikwe nendawo yazo. Ukuba awunawo umatshini wokuhlamba impahla, linda iiyure ezingama- 72 emva kweentsuku ezili-14 zokuzikhetha uhlala wedwa phambi kokuba uthathe iimpahla ziyokuhlanjwa.